Standard nnyocha ndị e mere na-agwụ ike maka sonyere, ma nke ahụ nwere ike na a ga-agbanwe.
N'ihi ya, anya, m na gwara gị banyere ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị ajụ na na-facilitated site na kọmputa-ndinọ ajụjụ ọnụ. Otú ọ dị, otu downside nke na kọmputa-ndinọ ajụjụ ọnụ bụ na ọ dịghị mmadụ interviewer iji nyere aka ime ka òkè. Nke a bụ a nsogbu n'ihi na nnyocha ndị e mere na-ma-eri oge ma na-agwụ ike. Ya mere, na-eme n'ọdịnihu, nnyocha e mere na-emepụta na-aga nwere chepụta gburugburu ha sonyere na-eme ka usoro nke-aza ajụjụ atọ ụtọ karị ma game-dị ka. Usoro a na-akpọ mgbe ụfọdụ gamification.
Iji maa atụ ihe a fun nnyocha e mere ike anya dị ka, ka na-atụle Friendsense, a nnyocha e mere na e packaged dị ka a egwuregwu on Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, na Duncan Watts (2010) chọrọ na-eme atụmatụ otú ihe mmadụ na-eche na ha dị ka ndị enyi ha na ole ha dị n'ezie dị ka enyi ha. Ajụjụ a banyere ezigbo ghọtakwa àgwà myirịta na-akawanye kpọmkwem na ndị mmadụ nwere ikike n'ụzọ ziri ezi aghọta ha na-elekọta gburugburu ebe obibi na nwere pụtara n'ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị polarization na Ọnọdụ nke ọha na eze. Echiche, n'ezie na-aghọta àgwà otú ihe dị mfe tụọ. The nchọpụta pụrụ nnọọ jụrụ ọtụtụ ndị banyere echiche ha ma jụọ ha enyi banyere echiche ha (a na-enye ohere maka amata ọtụtụ ezigbo àgwà nkwekọrịta) na ha gaara arịọ nza nke ndị mmadụ maa ndị enyi ha 'àgwà (a na-enye ohere maka amata ọtụtụ -aghọta àgwà nkwekọrịta). O di nwute na, ọ bụ logistically nnọọ ike ajụjụ ọnụ ma a respondent na ya na enyi. Ya mere, Goel na ndị ọrụ ibe che nnyocha e mere n'ime a Facebook na ngwa na-bụ fun na-egwu.
Mgbe a soò kwere ka ọ na-a nnyocha, na-eji ngwa họrọ otu enyi si respondent si Facebook akaụntụ na jụrụ ajụjụ banyere àgwà nke na enyi (ọgụgụ 3.9). Intermixed ajụjụ banyere enweghị usoro họrọ enyi, ndị respondent na-zara ajụjụ banyere onwe ya. Mgbe aza ajụjụ a jụrụ banyere enyi, ndị respondent a gwara ma ya azịza mere ziri ezi ma ọ bụ, ọ bụrụ na enyi ya na-aza, na respondent nwee ike ime ka ya na enyi na-ekere òkè. N'ihi ya, ka nnyocha e mere agbasawo akụkụ site malitere ịrịa mbanye.
Ọgụgụ 3.9: Interface si Friendsense ọmụmụ (Goel, Mason, and Watts 2010) . The eme nnyocha tụgharịa a ọkọlọtọ àgwà nnyocha e mere n'ime a fun, gamelike ahụmahụ. The ngwa jụrụ sonyere ma oké njọ ajụjụ na ndị ọzọ mfe ajụjụ, dị ka nke dị ka e gosiri na foto a. Image eji na ikike si Sharad Goel.
The àgwà ajụjụ e nwetara site ná General Social Survey. Dị ka ihe atụ, "Ọ [enyi gị] kwenyere Ndị Izrel ahụ ihe karịrị ndị Palestinians na Middle East ọnọdụ?" Na "ga [enyi gị] kwụọ ụtụ isi maka ndị ọchịchị na-enye eluigwe na ala ike na-elekọta?" N'elu ndị a dị oké njọ ajụjụ , na-eme nnyocha weere na ihe dị mfe ajụjụ: "Ọ ga-[enyi gị] kama na-aṅụ mmanya n'elu biya?" na "ga [enyi gị] kama nwere ike na-agụ uche, kama nke ike ife efe?" ndị a dị mfe ajụjụ mere ka usoro na-atọkwu ụtọ ka sonyere na nyekwaara ihe na-akpali tụnyere: ga àgwà nkwekọrịta abụ yiri maka akwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ajụjụ ndị dị ka mfe ajụjụ banyere mmanya na superpowers?
E nwere atọ isi na-esi na-amụ ihe. Mbụ, enyi ya bụ ndị ọzọ yiri ka-ajụ karịa ndị ala ọzọ, ma ọbụna ndị enyi ya ka na-ekwekọrịtaghị ihe 30% nke ajụjụ. Nke abụọ, ndị zaghachirinụ n'elu-eme atụmatụ ha kwekọrịtara na ndị enyi ha. Yabụ, ọtụtụ ndị di iche iche nke echiche nke dị n'etiti ndị enyi na-adịghị chọpụtara. N'ikpeazụ, ndị nọ ka hà ga-maara nke esemokwu ya na ndị enyi on ọjọọ ha mere nke ọchịchị karịa ka a tụsaara mbipụta banyere mmanya na superpowers.
Ọ bụ ezie na ngwa bụ agaghịkwa dị na-egwu (mwute ikwu na), ọ bụ a mma ihe atụ nke otú ndị nchọpụta nwere ike a ọkọlọtọ àgwà nnyocha e mere n'ime ihe na-atọ ụtọ. More n'ozuzu, na ụfọdụ creativity na imewe ọrụ, ọ bụ ike ka mma o ahụmahụ maka nnyocha e mere sonyere. Ya mere, oge ọzọ ị na-emebe a nnyocha e mere, wepụta oge na-eche banyere ihe ị pụrụ ime iji mee ka ahụmahụ mma ka gị sonyere. Ụfọdụ pụrụ ịtụ ụjọ na a nzọụkwụ n'ebe gamification nwere ike na-afụ ụfụ data àgwà, ma m na-eche na Ịnọ nkịtị gwụrụ sonyere bụ nnọọ ihe ka ukwuu n'ihe ize ndụ ka data mma.
The ọrụ nke Goel na ibe na-egosipụtakwa nke isiokwu nke na-esote ngalaba: ejikọ nnyocha ndị e mere ka ndị ọzọ data isi mmalite. Na nke a site na-ejikọ ndị nnyocha e mere na Facebook ndị na-eme nnyocha na-akpaghị aka nwere ohere a ndepụta nke ndị sonyere 'enyi. Nke ọzọ ngalaba, anyị ga-atụle linkages n'etiti nnyocha ndị e mere na ndị ọzọ na data isi mmalite n'ụzọ sara mbara karị.